MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Diplomatic relations established between the Republic of the Union of Myanmar and the Republic of Liberia
The Republic of the Union of Myanmar and the Republic of Liberia has established diplomatic relations at the level of Ambassadors, with effect from5May 2017 as the two countries are desirous of establishing friendly relations and mutually beneficial cooperation on the basis of the principles of the Charter of the United Nations, the principles of the Non-Aligned Movement and the norms of International Law in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
The Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations was signed in Beijing on5May 2017 by the Ambassador of the Republic of the Union of Myanmar to the People’s Republic of China and the Ambassador of the Republic of Liberia to the People’s Republic of China.
Myanmar is expanding its diplomatic ties with countries around the world. The Republic of Liberia is the 119th country with which Myanmar has established diplomatic relations.
Dated,5May 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် လိုက်ဘေးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင်ခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် လိုက်ဘေးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့သည် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ပါ မူကြီးများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့ကို အခြေခံပြီး သံတမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ထူထောင်လိုသည့် ဆန္ဒရှိကြသည့် အားလျော်စွာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံအမတ်ကြီးအဆင့်ဖြင့် သံတမန် အဆက်အသွယ် ထူထောင်ကြသည်။
နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင်သည့် ပူးတွဲကြေညာချက်ကို တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ လိုက်ဘေးရီးယား သံအမတ်ကြီးတို့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပေကျင်းမြို့၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံမှု တိုးချဲ့ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လိုက်ဘေးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၁၁၉) နိုင်ငံမြောက် သံတမန် အဆက်အသွယ် ထူထောင်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်